.တစ်သက်မှာတစ်ခါသာကြုံရမယ့် ကုသိုလ်တစ်ခုမှာ ရွှေလေးပိသာအပြင် ရွှေဆွဲကြိုး၊လက်ထပ်လက်စွပ်တို့ကိုပါချွတ်ပြီးလှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေတို့မိသားစု. – Thukhuma
.တစ်သက်မှာတစ်ခါသာကြုံရမယ့် ကုသိုလ်တစ်ခုမှာ ရွှေလေးပိသာအပြင် ရွှေဆွဲကြိုး၊လက်ထပ်လက်စွပ်တို့ကိုပါချွတ်ပြီးလှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေတို့မိသားစု.
ဝါဝါဝင်းရွှေရဲ့တူလေးက”ဘဝတစ်သက်တာမှာတစ်ခါသာကြုံခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ်တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရပါတယ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရဲ့စိန်ဖူးတော် နဲ့ထီးတော်တင်ပွဲကြီးမှာ ဦးလေးဖြစ်သူက ဦးဆောင်ပြီး ကျွန်တော် အပါအဝင် ညီငယ် ချစ်စု ညီငယ်သားထူး ညီငယ်သားထွေးတို့နဲ့ စိန်ဖူးတော်အထိကို တက်ရောက်ပူဇော်ကန်တော့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
စိန်ဖူးတော်ရဲ့ ထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှတော့ ညီငယ်သားထူး (ဝါဇင် ) က သူ့လည်ပင်းမှာ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးကို ချက်ချင်း သဒ္ဒါတရားပေါက်ချွတ် လှူခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်‌တော်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ မင်္ဂလာလက်ထပ်လက်စွပ်အဖြစ် ဦးလေးနဲ့အဒေါ်ကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ ပတ္တမြားလက်စွပ် နှစ်ကွင်းကို ပူးတွဲ ဂဟေဆက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ချိတ်ဆွဲလှုဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဦးလေးနဲ့ အဒေါ် မိသားစုကလည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအတွက် ရွှေပိသာချိန်(လေး ပိသာ)ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ထီးတော် စိန်ဖူးတော်မှ နတ်မင်းကြီးလေးပါး ရွှေ မဏ္ဍိုင် တော်ကြီးကိုပါ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်”ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဝါဝင္းေ႐ႊရဲ႕တူေလးက”ဘဝတစ္သက္တာမွာတစ္ခါသာႀကဳံခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ္တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ ႀကဳံခဲ့ရပါတယ္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ရဲ႕စိန္ဖူးေတာ္ နဲ႔ထီးေတာ္တင္ပြဲႀကီးမွာ ဦးေလးျဖစ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္ ညီငယ္ ခ်စ္စု ညီငယ္သားထူး ညီငယ္သားေထြးတို႔နဲ႔ စိန္ဖူးေတာ္အထိကို တက္ေရာက္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။
စိန္ဖူးေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါမွေတာ့ ညီငယ္သားထူး (ဝါဇင္ ) က သူ႔လည္ပင္းမွာ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ေ႐ႊဆြဲႀကိဳးကို ခ်က္ခ်င္း သဒၵါတရားေပါက္ခြၽတ္ လႉခဲ့ပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကြၽန္‌ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္မွာ မဂၤလာလက္ထပ္လက္စြပ္အျဖစ္ ဦးေလးနဲ႔အေဒၚကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့တဲ့ ပတၱျမားလက္စြပ္ ႏွစ္ကြင္းကို ပူးတြဲ ဂေဟဆက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ခ်ိတ္ဆြဲလႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္ ဦးေလးနဲ႔ အေဒၚ မိသားစုကလည္း ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြက္ ေ႐ႊပိသာခ်ိန္(ေလး ပိသာ)ကို ဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ထီးေတာ္ စိန္ဖူးေတာ္မွ နတ္မင္းႀကီးေလးပါး ေ႐ႊ မ႑ိဳင္ ေတာ္ႀကီးကိုပါ လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္”ဆိုၿပီး ေရးသားမွ်ေဝလာတာျဖစ္ပါတယ္။
.ယွန်းယွန်းရဲ့ မွေးနေ့အတွက် တစ်ကိုယ်တော် Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်မင်းခန့်.
.ယောင်္ကျားလေးတွေတောင် လုပ်ရန်မလွယ်ကူတဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲအရာတွေကိုအလွယ်တကူလုပ်ပြသွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်.
.အိပ်မက်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အားအင်အပြည့်ပဲဆိုတာ ပိုက်ဆံရှိလို့ပြောအားရှိတာလို့ ပြောဆိုသူအပေါ် ပြန်လည်အားပေးလာတဲ့ နေခြည်ဦး.